Foxtail Buffalo Grass - ​Ingca​ - Mzantsi Afrika
Ingca efanelekileyo kunye nokuvelisa amaqabunga aphezulu. Kodwa, ukutshatyalaliswa, kunjalo, kucutha njengoko isityalo sikhula. I-Foxtail Buffalo Grass, ke kunjalo, kunzima ukusungula kumhlaba wodongwe, kodwa emva kokusungulwa, kukhula kakuhle.
Lungisa ukuya kwi-1 m. Iingcingo ezihlala zingapheli eziyi-8 mm zamagqabantshi. I-Inflorescence yintonga enesigxina. Olu hlobo lwenkcazo luyathandeka kwaye luyakuthandwa ngokutya ukutya kweerbivores. I-spikelets ijikelezwe yi-wavy bristles ezininzi ezivela kwi-stalk efutshane.
Foxtail Buffalo Grass ikhula kwiindawo ezinomileyo, ezifudumeleyo. Ikhula kuzo zonke iintlobo zomhlaba, kodwa ininzi kwindawo yomhlaba kunye nezinye iintlobo zomhlaba ezichumiweyo. Ixhaphake kulo lonke elaseMzantsi nelaseMntla Afrika nakwiMeditera.Izihlomelo -Agasti kuMzantsi AfrikaIi.
Foxtail Buffalo Grass yintlobo yokulwa nesomiso efumaneka kwiindawo ezinomileyo kwaye iintlobo ziye zithunyelwa kumazwe afana ne-Australia apho kubaluleke khona ingca.